ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန | Ministry of Finance
Securities Auction Procedures for Treasury Bills
ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး
Public Private Partnership (PPP) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းပို့ချခြင်း
Financial Management Performance နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
Budget Analysis Mission နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
သာမန်၊ ငွေလုံးငွေရင်းဘတ်ဂျက်များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေး Mr. Kevin Clougherty နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
Myanmar Public Expenditure Review 2017 Workshop ကျင်းပခြင်း
၁။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအားအရာထမ်းရာထူး(၁၇၅)နေရာ၊အမှုထမ်းရာထူး (၃၅၇) နေရာ၊စုစုပေါင်းရာထူး(၅၃၂)နေရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို၁၉-၆-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၄)က အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
၂။ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၌ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနဖွင့်ပွဲမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ(Cash Management Division)
ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ(Debt Management Division)
စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ (Accounting and Reporting Division)
ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ(Treasury Policy and Quality Promotion Division)
စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ(Administration and Accounts Division)
၄။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲအောက်တွင်ငွေကြေးခန့်မှန်းတွက်ချက်ဌာနစု၊ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစုဟူ၍ဌာနစု(၂)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-
ငွေကြေးခန့်မှန်းတွက်ချက်ဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ငွေကြေးစီးဝင်လာမှုများကို ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ငွေကြေးအစီအစဉ်နှင့်အညီ ငွေကြေးစီးဝင်မှု(ရငွေ)ခန့်မှန်း တွက်ချက်ခြင်း
ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှတင်ပြလာသော ငွေသားစီးဝင်မှု အစီအစဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍(၃)လတစ်ကြိမ်၊(၁)လတစ်ကြိမ်ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့တွင် ထားရှိသော နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်Treasury Single Account ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့အကြားပိုမိုမြန်ဆန်သော စာရင်းရှင်းလင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့်ထိန်းကျောင်း ကြီးကြပ်ခြင်း
ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့် သုတေသနဌာနခွဲနှင့်ပူးပေါင်း၍ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများချမှတ်ခြင်း
၅။ ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲအောက်တွင် ကြွေးမြီစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပေးဆပ်ရေးဌာနစု (back office)၊ ကြွေးမြီမူဝါဒနှင့်ဆန်းစစ်ရေးဌာနစု(Middle office)နှင့်ကြွေးမြီစိစစ်ရေးဌာနစု (front office)ဟူ၍ (၃)ပိုင်းခွဲ၍ ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်-
ကြွေးမြီစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပေးဆပ်ရေးဌာနစု(back office)၏လုပ်ငန်းတာဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ကြွေးမြီစိစစ်ရေးဌာနစု (Front office)၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း
နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ချေးထားသောချေးငွေများ၊ အခြားသောအရေးပေါ် ပေးချေ ရမည့်ပေးရန်တာဝန်များနှင့် နိုင်ငံတော်မှတာဝန်ယူ အာမခံချက်ပေးထားသော ကြွေးမြီဆိုင်ရာ စာရင်းများထားရှိခြင်း
Debtservicingဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် ကြွေးမြီပြန်လည်ပေးဆပ်မှုများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ Software ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်း
ကြွေးမြီမူဝါဒနှင့်ဆန်းစစ်ရေးဌာနစု(Middleoffice)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ကြွေးမြီဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း
အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများ၊ ထုတ်ချေးထားသောချေးငွေများနှင့်ကြွေးမြီဆိုင်ရာအာမခံချက်များအပါအဝင် အရေးပေါ်ပေးရန်တာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၏ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုခံယူဆောင်ရွက်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ ပြည်ပချေးငွေဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းနှင့် အကြံပြုတင်ပြခြင်း
ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းလိုငွေ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအတွက် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကြွေးမြီစိစစ်ရေးဌာနစု ( Front office ) ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ကြွေးမြီဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့်အညီ ပြည်သူများသို့ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၆။ စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲအောက်တွင်ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှု ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစု၊ စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးဌာနစုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှု ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစု၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ဝန်ကြီးဌာန၊ဦးစီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်အား တိကျမှန်ကန်စွာသုံးစွဲမှုရှိစေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း
ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးခါနီးမှအသုံးစရိတ် များအားအလျင်အမြန်သုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးတစ်နှစ်တာအတွင်းမှန်ကန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို ကြီးကြပ်ခြင်း
ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရှိအခြေခံစာရင်းပြုဌာနများတွင်ကတိကဝတ်ထိန်းကျောင်း ကြီးကြပ်မှုကိုတစ်ဆင့်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာ တစ်ရပ်ချမှတ်ခြင်း
အခြေခံစာရင်းပြုဌာနများတွင် ကတိကဝတ် ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်မှုစနစ် ဆောင်ရွက်မှုအား စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးသပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ဝင်ရောက်တည့်မတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနစု၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
နေ့စဉ် အရအသုံးလက်ကျန်များကို သိရှိနိုင်ရန် စာရင်းများအား ကိုက်ညှိခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တို့သို့တင်ပြခြင်းနှင့်ပြည်သူသို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း
စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
၇။ ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲအောက်တွင် ငွေတိုက်မူဝါဒနှင့် သုတေသနဌာနစု၊ ငွေတိုက်စည်းမျဉ်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစုတို့ရှိပါသည်။
ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့်သုတေသနဌာနစု၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်အသုံးစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မူဝါဒများချမှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
ငွေတိုက်စာရင်းပြုစုခြင်း၊အစီရင်ခံခြင်း၊ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရန်ဆောင်ရွက်မည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
အားနည်းချက်များကို စနစ်တကျဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအစီအစဉ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်း
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်အတွက်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ရန် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဝန်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ချမှတ်ထားသောငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှုရှိစေရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အစိုးရဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့်အခြားဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကြံပြုချက်များရယူပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း
ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် စာရင်းရေးသွင်းသည့်ပုံစံများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၏
ငွေတိုက်စည်းမျဉ်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစု၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ဌာနခွဲအသီးသီးမှ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော ပြောင်းလဲ မှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲချမှတ်ခြင်း
PFM စနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား မူဝါဒများ၊မဟာဗျူဟာများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာစေရန် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနစုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၈။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲအောက်တွင်ကွန်ယက်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ဌာနစုနှင့်ကွန်ယက်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစုတို့ဖြစ်ပါသည်။သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
အစိုးရဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအား ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသောဌာနအဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုစည်းထားသောစနစ် International Financial Management Information System (IFMIS) စနစ်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း
အနာဂတ် အစိုးရဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ထောက်ကူနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ငွေတိုက်လုပ်ငန်းအတွက် အချက်အလက်ကွန်ယက်(Data Network)၊ စက်ပစ္စည်း များနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦ တို့ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အစီအစဉ်နှင့်စနစ်ပျက်ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပါက လုပ်ငန်း (Data) များ ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့်အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်း
International Financial Management Information System (IFMIS) စနစ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်Treasuryဌာနတို့အကြားအဓိက ဆက်သွယ်ပေးသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန်နှင့်လိုအပ်သောအကူအညီများ ပေးအပ်ခြင်း
၉။ စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲအောက်တွင် စီမံရေးရာဌာနစု၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာနစုနှင့် ငွေစာရင်းတို့ရှိမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ဝန်ထမ်းများ၏ရာထူးခန့်ထားခြင်း၊ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိခြင်း၊ နှစ်တိုးလစာခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ခွင့်ခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊အငြိမ်းစားယူခြင်း စသော ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
ပြည်ပသို့အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊ပညာသင်စသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်နိုင်ငံခြားသွား ခွင့်ပြုမိန့်များနှင့်အခြားလိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းကိစ္စရပ်များ၊ လစာစရိတ်အပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု ပြုခြင်းနှင့် စာရင်းများစနစ်တကျ ပြုစုထားရှိခြင်း၊
၁၀။ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအား ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ်(၃၄)၌ ရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်၍ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်သည့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့် အစီရင်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အောက်ပါဌာနခွဲ(၄)ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (Cash Management Division)
ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (Debt Management Division)
စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာန (Accounting and Reporting Division)
စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာန (Administration and Accounts Division)
၁၁။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ် ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအရနည်းပညာအကူအညီများကိုအဖွဲ့အစည်းများမှရယူ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(၁) ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့
(၂) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုခြင်း အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့
(၃) ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှု အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
၁၂။ အစိုးရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များထုတ်ဝေခြင်းနှင့်လေလံစနစ်ဖြင့်ရောင်းချ နိုင်ရေးတို့ကို IMF နှင့် ADB ပညာရှင်များ၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့ပူးပေါင်း၍ အစိုးရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအားဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းကို၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၂၈)ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊
Copyright 2015 © Ministry of Finance and Revenue. All rights reserved. Powered by Information Matrix